Top5Best ECN Brokers in July 2022 | Pros & Cons Uncovered
5 ၏ထိပ်ဆုံး ECN ပွဲစားများ
အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများ? သင်သိသည်အတိုင်း, Forex စျေးကွက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရည်အချင်းအရှိဆုံးကုန်သွယ်ရေးမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်ရေးကမ္ဘာကိုလေပြင်းတိုက်ခတ်နေသောအီလက်ထရွန်နစ်စနစ်ကိုသင်ကြားဖူးပါသလား။
အီလက်ထရွန်နစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်၏အတိုကောက်ဖြစ်သော ECN သည်သင့်အားကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်စျေးကွက်ရှိဘဏ္aာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိစေသည်။
ဘဏ္technologicalာရေးနယ်ပယ်တွင်ဤနည်းပညာတိုးတက်မှုများကြောင့် Forex ပွဲစားအမြောက်အများသည်ဤပိုမိုလွယ်ကူသောစနစ်ဖြစ်သော ECN ကိုစတင်အသုံးပြုနေကြသည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစနစ်က ECN ပွဲစားများကိုအခြား forex ကုန်သည်များအသုံးပြုတဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုမှာအရောင်းအ ၀ ယ်တွေကိုခွင့်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
စျေးကွက်အတွင်းဖြစ်လိုသည့်အတိုင်းမပါ ၀ င်နိုင်သောကုန်သည်များ၊ သို့မဟုတ်မတူကွဲပြားမှုကိုအနည်းငယ်မျှသာလိုချင်သူများအတွက် - ECN ပွဲစားများသည်စံပြဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုက၊ ဘယ်သူက ပိုတင်းကျပ်ချင်လဲ။ န့် ကော်မရှင်ခနှုန်းထားများ သက်သာပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Learn2Trade တွင် ECN ပွဲစားများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုကို စုစည်းထားပြီး ECN ၏အခြေခံများ၊ သတိထားရမည့်အရာများအတွက် အသုံးဝင်သော အကြံပြုချက်များစွာကို စုစည်းထားပါသည်၊ အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများ အဲမှာ မင်းရဲ့ စဉ်းစားစရာ။
€ 10 (၀.၀၀၀၂ ကွက်)၊
4 သင်၏ စစ်ထုတ်မှုများနှင့် ကိုက်ညီသော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ
ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူ CFDs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်အခါလက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံအကောင့်အသစ်များ၏ 79% ပိုက်ဆံရှုံးသည်။
တစ်ဦး ECN ပွဲစားကဘာလဲ?
အတိုချုပ်ပြောရရင်နိုင်ငံခြားငွေကြေးရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကအာရုံစိုက်တာကအမြတ်အစွန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအမြတ်အစွန်းရအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထဲမှာ Forex ဈေးကွက် အဓိကပွဲစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့ရှိသည် STP ပွဲစားများ; အရာ '' ဖြောင့်မှတဆင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ '' ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်သင်နှင့် (ကုန်သည်) အရည်အချင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသူများအကြားနှင့်ရှေ့သို့သွားသော 'အလယ်အလတ်' ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအချက်အနေနှင့်သင့်တွင် ECN ပွဲစားများရှိပြီးသင် (ကုန်သည်) နှင့်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူများ (ငွေထုတ်ချေးသူ) များအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးပေးသည်။ ECN ပွဲစားကိုသမားရိုးကျပွဲစားနှင့်ခွဲခြားသည်မှာ ECN 'စနစ်' အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။
ဤစနစ်သည်လဲလှယ်အတွင်းရောင်းဝယ်သူများနှင့် ၀ ယ်သူများအားသူတို့၏ကုန်သွယ်ရေးရာထူးများအတွက်ကိုက်ညီမှုကိုရှာဖွေနိုင်စေသဖြင့်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကုန်သွယ်မှုတွင်ဤပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ငွေကြေးစျေးကွက်ရှိအခြားတွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူများစွာကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည်စျေးကွက်လက်တွဲဖော်များ၏စျေးနှုန်းများကိုပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့် ECN ပွဲစားသည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုတင်းကျပ်သောတောင်းခံလွှာများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကော်မရှင်နှုန်းများကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအကြောင်းပိုမို။
ကိုဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Forex ကုန်သွယ် စျေးကွက်, သင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးသင့်လျော်သောပွဲစားကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Forex သည်အစုရှယ်ယာများနှင့်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့တူညီသောနည်းဖြင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊
သင်မည်သည့်ပွဲစားကိုအသုံးပြုသည်အပေါ် မူတည်၍ သင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်ရေးရာထူးများနှင့်လဲလှယ်နှုန်းကိုရရှိနိုင်သည်။ သင်အမြတ်အစွန်းရှိသည့် Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လိုပါကသင်ရွေးချယ်သောကုန်သည်အမျိုးအစားအတွက်မှန်ကန်သောပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးအကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများကသင့်ကိုကူညီနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောသို့မဟုတ်ရှာဖွေနေသည့် ECN ပွဲစားသည်အပြည့်အဝလိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းများသေချာစေရန်အမြဲတမ်းစတင်ပါ။ ပွဲစားတော်တော်များများသည်တပြိုင်နက်တည်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းသူတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးမှတ်ပုံတင်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်သည်သင်၏ရန်ပုံငွေတွင်ပိုမိုလုံခြုံသောအလွှာတစ်ခုပါရှိသည်။
သင်၏ ECN ပွဲစားကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်ထားသည်သာမက၎င်းသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောကုန်သွယ်မှုအကောင့်များနှင့်ပလက်ဖောင်းများကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင်ဤသည်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဦး စားပေးမှုဖြစ်ပြီးသင်၏ကုန်သွယ်မှုပုံစံပေါ်မူတည်သည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားအချက်များမှာနည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများ၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများ၊ အနည်းဆုံးအပ်ငွေများ၊ ခွင့်ပြုထားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေကြေးအတွဲများ၊
ECN ပွဲစားနှင့် Market Maker vs
ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ကိုမကြည့်ခင် 'market maker' ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူသည်အဓိကအားဖြင့်ပွဲစားဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စနစ်ဖြင့်စျေးနှုန်းများကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ အချို့သောအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်၎င်းကို 'စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း' ဟုခေါ်သည်။
ထို့နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများ၏ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိစျေးနှုန်းများကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက်တွင်စျေးကွက်အတွင်းအရောင်းအ ၀ ယ်အနေအထားများကိုဖွင့်နိုင်ပြီးပိတ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများသည်အခြားငွေဖြစ်လွယ်သောပံ့ပိုးသူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုနေရာမချထားပါ အခြားရောင်ခြည်၏အဆုံး၌အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်လုပ်ကြသည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်သည်အနိုင်ရအနေအထားသို့ရောက်ရှိလျှင်စျေးကွက်ပွဲစားသည်အရှုံးပေါ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနိုင်ရသည့်ရာထူးသည်ဖောက်သည်အားစျေးကွက်ရှာဖွေသူ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပွဲစားများနှင့်ကွဲပြားကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောငွေထုတ်ချေးပေးသူများထံမှစျေးနှုန်းများကိုခွင့်ပြုခြင်းနှင့်တူညီသောလေလံတစ်ခုအတွင်းယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပွဲစားများနှင့်မတူဘဲ ECN ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ရာထူးတစ်ခုစီအတွက်သတ်မှတ်ထားသောကော်မရှင်တစ်ခုအားသွင်းခြင်းဖြင့်အမြတ်အစွန်းရရှိစေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့် ECN ကော်မရှင်နှင့်အခကြေးငွေများနှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်ကျနိုင်သည်။
ငါအဘယ်ကြောင့် ECN ပွဲစားနှင့်အတူကုန်သွယ်သငျ့သလော
သင်ဤအချက်အားမရောင်းရသေးပါက ECN ပွဲစားမှတစ်ဆင့် Forex အတွဲများကိုအရောင်းအဝယ်ပြုခြင်းသည်သင်အခြားပွဲစားအမျိုးအစားများမကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိစေရန်သေချာစေသည်။
ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်လူအစုအဝေးမှထွက်လာရတာလဲ
Forex ကုန်သည်များအသုံးပြုသောအဓိကပလက်ဖောင်းနှစ်မျိုး၏ခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ECN ပွဲစားများသည်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်သောအရာအားကျွန်ုပ်တို့ယခုလေ့လာကြတော့မည်။
ECN ပွဲစားသည်သင်၏ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းအကြားညှိနှိုင်းသူမျှသာဖြစ်သည်။ Layman ၏စည်းကမ်းချက်များအရပွဲစားသည်အလိုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည် ဘယ်တော့မှ သင်၏ရာထူးဆန့်ကျင်ကုန်သွယ်မှု။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, STP ပွဲစားများသည်ပconflictိပက္ခဖြစ်ရာနေရာများဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ကုန်သွယ်ရန်လူသိများကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့် GBP / USD တွင် ၀ ယ်ရန် (ရှည်လျားသော) အနေအထားကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ STP ပွဲစားသည်ထိုအနေအထားကိုငွေထုတ်ချေးပေးသူအားထောက်ပံ့ပေးလျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သင်မသိနိုင်သည့်အချက်မှာ STP ပွဲစားသည် GBP / USD တွင်ရောင်းချခြင်း (တိုတောင်းသော) ရာထူးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်၎င်းသည်သင်၏အနေအထားနှင့်လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်၍ အဓိကအကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပုံရသော်လည်း STP ပွဲစားများကဤသို့ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏ GBP / USD ရှည်လျားသောကုန်သွယ်မှုမှသင်အရှုံးပေါ်ခဲ့လျှင်ပွဲစားသည်ငွေပေးချေမှုကိုအနိုင်ရရှိသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ အောင်မြင်နှင့်ပွဲစားသည်၎င်း၏ရန်ပုံငွေများကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်တို့တဘက်၌အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့်လုပ်ရပ်ပွဲစားများအတွက်အဘို့အပြန်ဖွင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း၊ အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည် သင်၏ရာထူးများကို ငွေဖြစ်လွယ်သောဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ တင်ပြရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစား သင်ကိုယ်တိုင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဤကွန်ယက်ကို Forex ကုန်သည်များစွာလက်လှမ်းမီနိုင်သဖြင့် ECN forex ပွဲစားများကပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေများကိုလွယ်ကူသက်သာစေသည်ဟုမကြာခဏပြောကြသည်။ ECN ပွဲစားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စျေးနှုန်းခြယ်လှယ်ခြင်းကိုကန့်သတ်ထားပြီးအခြားရိုးရာပွဲစားများထက်အနည်းငယ်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိစေသည်။ ဤအချက်သည်အဓိကအားဖြင့်သူကသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဈေးနှုန်းနှင့်ဈေးနှုန်းများကိုမတောင်းဘဲထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ECN ပွဲစားများသည် ECN စနစ် (သို့) စိတ်ဝင်စားသော Forex ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားကုန်သွယ်ရေးအတွက်တံခါးများကိုဖွင့်ကြသည်။ ငွေပေးငွေယူအပြည့်အစုံအတွက်ကော်မရှင်နှုန်းသတ်မှတ်ချက် (သတ်မှတ်ထားသည်ထက်) ကိုအားသွင်းခြင်းအားဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုများဟာပုံမှန်ပွဲစားများထက်အများကြီးနိမ့်ကျတယ်ဆိုတာသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ပိုမိုတိကျသောစျေးနှုန်းများအပြင်အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်ဖောက်သည်များအားတိကျသောစျေးနှုန်းသမိုင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများနှင့်တိုက်ရိုက်နှင့်လက်ရှိဘဏ္newsာရေးသတင်းများကိုလည်းပေးသည်။
စျေးနှုန်းကိုရင်းမြစ်နှင့်အတူသရုပ်ဖော်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်သည်များသည်ချက်ချင်းကုန်သွယ်နိုင်ပြီးတင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှု၏အားသာချက်ကိုရယူနိုင်ကြသည်။ ချက်ချင်းအတည်ပြုချက်များအရ၊ သင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါနိမ့်ကျသောကော်မရှင်များနှင့် ECN ပွဲစားများကမ်းလှမ်းသည့်ပြန့်ပွားမှုကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ဤတကယ့်လက်တွေ့ကျသောကိုးကားချက်များကိုရရှိခြင်းသည်သင့်အား 'ပြန်လည်ကိုးကား' ဟုခေါ်သည့်အရာများကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
သတိမထားမိသူများအတွက်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောပစ္စည်းတစ်ခု၏စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးအမိန့်ကိုငြင်းပယ်သောအခါပြန်လည်ကိုးကားခြင်းများဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။ ဤအချက်မှာပွဲစားသည်အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြန်လည်ကိုးကားသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲကိုးကားခြင်းသည်သင်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုမရရှိစေခြင်းကြောင့်ရေရှည်တွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ECN - Middleman ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွန်းပြောဆိုသောအဓိကအလယ်အလတ်များသည် STP ပွဲစားများဖြစ်သည်။ သင်စတင်ရောင်း ၀ ယ်သောအခါကုန်သွယ်မှုအတွက်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသောကုမ္ပဏီအားလုံးလိုအပ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေးသူများဟုခေါ်ဆိုခြင်းမရှိဘဲ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ငွေဖြစ်လွယ်မှုပံ့ပိုးပေးသူများနှင့်ကုန်သည်များသည်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိကြပါ။ ဤအတွက်, 'အလယ်အလတ်' ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်သူတို့အခန်းကဏ္ trading သည်ကုန်သွယ်ရေးပါတီနှစ်ခုစလုံးကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုလိုက်ဖက်ရန်ဖြစ်သည်။
ECN ပွဲစားနှင့်သင်ကုန်သွယ်သောအခါမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသင်မည်သူမျှမသိပါ။ အမည်မသိဖြစ်ခြင်း၏အထူးအကျိုးကျေးဇူးမှာကုန်သွယ်မှုသည်စျေးကွက်အခြေအနေနှင့်ကြားနေစျေးနှုန်းများအပေါ်အခြေခံသည်။
အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှတစ်ဆင့်ရာထူးများကိုလွယ်ကူစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ကုန်သည်တစ် ဦး ၏အနေအထားကိုမမှတ်မိတော့ဘဲ၎င်းတို့အားငွေထုတ်ချေးသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်မိမိတို့၏ကိုးကားချက်များကိုမဖန်တီးကြပါ။ ယင်းအစားသူတို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာရရှိရန်အမျိုးမျိုးသောငွေထုတ်ချေးသူများကိုသာ အသုံးပြု၍ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
ဤပွဲစားသည်အထူးသဖြင့်ပိုမိုကြီးမားသောအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုပွဲစားများကသူတို့လိုအပ်ပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအမည်မဖော်လိုကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
GBP / USD (1 lot အတွက်) အတွက် pair pair ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။
သင်၏ပွဲစားသည်ငွေထုတ်ချေးသူနှင့်ညှိနှိုင်းရမည့်အစား ECN ပလက်ဖောင်းသည်သင့်ကိုသင်ပလက်ဖောင်းတွင်တက်ကြွဆုံး GBP / USD ပေးသူနှင့်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။
ဒါဟာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်, ပိုင်ဆိုင်မှုဤမျှလောက်အရည်ဖြစ်စဉ်းစားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အလယ်အလတ်ရောနှောထဲကထုတ်ယူနှင့်ကုန်သွယ်မိတ်ဖက်များ၏လမ်းအတွက်လာသောသူတယောက်မျှမရှိ။ အရေးကြီးသည်မှာ yo ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်ငွေချေးစာချုပ်များကိုချက်ချင်းလက်ငင်း ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။
ECN စျေးကွက်များရှိ Bid-Ask Spreads
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်မတူညီသောအမျိုးမျိုးသောအချက်အချာဖြစ်သည် Forex ဈေးကွက် ကုန်သည်များ။ ဤရွေ့ကားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများ (မဟုတ်ရင် hedge funds အဖြစ်လူသိများ) မှစီးပွားဖြစ်ဘဏ်များအထိဘာမှဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူအမြောက်အများရှိခြင်းကြောင့်စျေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းစသည့်စျေးနှုန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။
အချို့သောငွေထုတ်ချေးပေးသူများသည်လေလံစျေးပိုရသော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာသောကြောင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာပြန့်ပွားနိုင်သည်။ သို့သော်အချို့သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများသည်လေလံစျေးနှုန်းနိမ့်သော်လည်းမြင့်မားသောစျေးနှုန်းများကိုမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောပြန့်ပွားမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်သည်ငွေပေးချေသူတစ် ဦး ထံမှဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ငွေစက္ကူတစ်ချောင်းကို ၀ ယ်ယူပြီး၎င်းကိုအခြားငွေထုတ်ချေးပေးသူထံသို့ထပ်မံရောင်းချနိုင်သည်။ ဤသည်သည်အခြားပွဲစားများမပေးသောအဆင်ပြေမှုမျိုးဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများမှတစ်ဆင့်ကွဲပြားခြားနားသောပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Forex Pairs ။
စဉ်းစားစရာအကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများကိုရှာဖွေသည့်အခါ
ECN ပွဲစားအရေအတွက်သည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာနေသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအရဤအချက်မှာစျေးကွက်သည်ဗဟိုမဖြစ်သောကြောင့်ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေနှင့်ငွေလဲလှယ်နှုန်းအမျိုးမျိုးကိုရယူသုံးစွဲနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပွဲစားများနှင့်ကုန်သည်များအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ECN ပွဲစားများသည်ပိုမိုကြီးမားသောအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုအထူးနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာဟုယူဆနိုင်သည်။
ဤသို့ပြောခြင်းဖြင့် ECN ပွဲစားသည်သင့်အတွက်မည်သည့်အရာနှင့်သင့်တော်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးသေချာအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအနည်းငယ်ရှိသည်။
သင်ရွေးချယ်သော ECN ပွဲစားသည်အနည်းဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပွဲစားသည်သင်နေထိုင်သည့်တိုင်းပြည်တွင်ရှိနေခြင်းသေချာစေရန်မှာလည်းကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တူညီသောတရားရေးစနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ အရာရာကိုစီစဉ်ရန်မသွားပါက၎င်းသည်အရာရာကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုဗြိတိန်ပွဲစားတရားဝင်တစ်ခုကျင်းပရန်တာဝန်ရှိသည် FCA လိုင်စင် (ဘဏ္Conာရေးအခွင့်အာဏာ) ။ အပြည့်အ ၀ လိုင်စင်ရသည့်ပွဲစားကိုအသုံးပြုသောအခါသင်သည်ယူကေ / အီးယူဥပဒေများမှပြby္ဌာန်းထားသည့်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအမံများဖြင့်သင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးသည်ကိုသေချာစေနိုင်သည်။
လိုင်စင်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပြည့်ဝသောပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်း၏အရေးပါမှုကိုအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤလိုင်စင်၏နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားအကာအကွယ်ပေးသည့် IPS ၏ IPS ဖြင့်လည်းသင်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်ကိုသင်သိလိုပေမည်။
IPS ကသင်၏ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုပွဲစား၏ရန်ပုံငွေများနှင့်ခွဲထားရန်သေချာသည်။ အချို့ပွဲစားများသည်သူတို့၏ကုမ္ပဏီအမည်တွင်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုပြုလုပ်ကြသော်လည်းသင်၏ငွေများကိုသီးခြားစီသိမ်းထားသည်။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်ပွဲစားများသည်သင်၏အမည်ဖြင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပြီးသင်၏ရန်ပုံငွေများကိုထိုနေရာတွင်ထားနိုင်သည်။
ရန်ပုံငွေကာကွယ်မှုအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ဒေဝါလီခံသည့်ပွဲစားတစ်ယောက်၏ကံမကောင်းသောအဖြစ်အပျက်တွင်သင့်အားစိတ်ငြိမ်သက်မှုပေးလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ရန်ပုံငွေဟာပွဲစားရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြွေးနဲ့မပျောက်သွားလို့ပဲ။
ကုန်သည်များသည် ECN ပွဲစားတစ်ယောက်၏ပျံ့နှံ့မှုကိုအဘယ်ကြောင့်နည်းစေသနည်းဟုကုန်သည်များကမကြာခဏတွေးကြသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းရိုးရှင်းသောအချက်မှာ၎င်းတို့သည်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များစွာကိုသူတို့၏စျေးနှုန်းကိုးကားချက်များနှင့်အတူတကွပေါင်းစပ်ထားသည်။
သင်၏ရွေးချယ်မှုလေလံရွေးချယ်မှုသည်ကြီးမားလိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းချိုသာသောဈေးနှုန်းချိုသာသောဈေးနှုန်းချိုသာသောငွေပေးချေသူအချို့ရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လေလံစျေးနှုန်းနိမ့်ကျတဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ဈေးနှုန်းချိုသာစွာပေးတဲ့ပံ့ပိုးသူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနည်းဆုံးတော့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ကိုးကားချက်တွေကို ECN forex ပွဲစားကအမြဲတမ်းကောက်ယူတာပဲ။
သင်၏ ECN ကုန်သွယ်ရေးအကောင့်ကိုသင်ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ပွဲစားပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်အနည်းငယ်ကွာခြားလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများသည်မတူညီသောငွေပေးချေမှုပုံစံများကိုရွေးချယ်ကြသည်။ အသုံးအများဆုံးငွေပေးချေမှုရွေးစရာများမှာ
အကြွေးဝယ်ကဒ်၊ ထိုကဲ့သို့သော Mastercard နှင့်ဗီဇာအဖြစ်။
အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များ; ကဲ့သို့ PayPal က, Skrillနှင့် Neteller.
သင်ရွေးချယ်ထားသော ECN ပွဲစားသည်နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်းကိန်းများအပြည့်အဝပါ ၀ င်ရန်သေချာစေလိုသည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သင့်သည် -
ဆွေမျိုးအစွမ်းအညွှန်းကိန်း (RSI) ။
Ichimoku Kinko Hyo (AKA Ichimoku Cloud)။
ပျမ်းမျှ Directional အညွှန်းကိန်း (ADX) ။
နာမည်ကြီးသော ECN ပွဲစားများသည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအတွက်ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့များစွာရှိသော်လည်းသင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုမှာအခြားဖောက်သည်များမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များပြန်မလာစေရန်နှုတ်ဖြင့်ပြောခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
လက်တွေ့အားဖြင့်အလင်းရောင်နှင့်အမှောင်ကဲ့သို့ကောင်းသောအရာအများစုသည်ဆိုးကျိုးများလည်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ECN ပွဲစားနှင့်ငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်သည့်အားနည်းချက်အချို့ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးရပါမည်။
ECN ပွဲစားများသည်ပြန့်ပွားမှုကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအဖြစ်မယူသောကြောင့်ငွေပေးချေမှုတစ်ခုစီအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များရရှိလိမ့်မည်။ ထိုကော်မရှင်များသည်မည်မျှကြီးမားသည်နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးဘတ်ဂျက်သည်မည်မျှကြီးမားသည်ကိုမူတည်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် ECN ပွဲစားများသည်အသေးစားကုန်သွယ်ရေးအစုရှယ်ယာများနှင့်မသင့်တော်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်၏အမြတ်အစွန်းများသည်ကော်မရှင်၏အခကြေးငွေဖြင့်စားမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ECN ပွဲစားနှင့်အကောင့်ဖွင့်ရန်သင်ပလက်ဖောင်းများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောသိုက်အခကြေးငွေကိုမျှော်လင့်ကြောင်းသင်မကြာခဏတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည်သင့်အားငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေးသူများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငွေဖြစ်လွယ်မှုပံ့ပိုးပေးသူများအနေဖြင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုစရိတ်များရှိနိုင်သဖြင့်စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများသည်ရံပုံငွေပမာဏ ၁၀,၀၀၀ (သို့မဟုတ် ၀.၁ စာရေးနှုန်း) ကိုတစ်ခါတစ်ရံကိုင်ထားနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ငါ ECN ပွဲစားကိုအသုံးပြုသင့်သလဲ
အချို့သောကုန်သည်များသည် ECN ပလက်ဖောင်းများကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးသုံးစွဲရန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်သာစလိုက်လျှင်၎င်းသည်မသင့်တော်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်လျှင် အမှန် ECN ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်ကုန်သွယ်လိုသည်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလေ့လာခြင်းသည်ကျိုးနပ်လိမ့်မည်။
အထူးသဖြင့်ပိုမိုတင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုနှင့်ကြီးမားသောရာထူးများဖွင့်ခြင်းမှသင်အကျိုးခံစားလိုပါကကောင်းသောအရာသည်ဆိုးကျိုးထက်သာလွန်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။ စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်ပိုနည်းပါက Learn2Trade မှ STP ပွဲစားများနှင့်ယခုလက်ရှိနေရန်အကြံပြုပါလိမ့်မည်။
ECN ပွဲစားနှင့်အတူစာရင်းသွင်းခြင်း - မည်သို့လမ်းညွှန်
ယခုတွင်သင်သည် ECN ပွဲစားများတွင်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သင်စတင်ချင်ပေမည်။
ပထမ ဦး စွာသင် ECN ပွဲစားသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုအပ်သည်။ ပွဲစားအမြောက်အများကရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာများရှိနေသဖြင့်အပြည့်အဝမကျူးလွန်မီသင်၏ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
အဆင့်တစ် - ECN ပွဲစားကိုရှာပါ
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော ECN ပွဲစားသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသနည်း။ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ Learn2Trade မှကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့သည်ဂျုံနှင့်အခွံကိုခွဲထုတ်ရန်သင့်အားကူညီရန်အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများစာရင်းကိုစုစည်းထားသည်။ ဒီလမ်းညွှန်ရဲ့အဆုံးမှာတွေ့နိုင်တယ်။
အဆင့်နှစ် - အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ
အီးမေးလ်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။
လိုအပ်သော ငွေကြေးအချက်အလက် သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုမှတ်တမ်းကို ထည့်သွင်းပါ (၎င်းသည် မတူညီသော ပလပ်ဖောင်းများကြားတွင် ကွဲပြားလိမ့်မည်)။
အဆင့်သုံး - ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
ယခုတွင်သင်သည်သင်၏အထောက်အထားအထောက်အထားတင်ပြရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထပ်မံ၍ ဤအရာသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်၊ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူကိုသာပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။
အချို့သော ECN ပွဲစားများသည်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထပ်မံသက်သေပြနိုင်သည်။ သင်၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့်လူနေအိမ်လိပ်စာပါသော utility bill၊ ဖုန်းငွေတောင်းခံမှုသို့မဟုတ်အခြားတရားဝင်စာတစ်စောင်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
အဆင့်လေး - အတည်ပြုချက်
ရှည်လျားလွန်းသည်ဟုသင်ခံစားရပါက ECN ပွဲစား၏ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမှသင့်အားတားဆီးစရာဘာမှမရှိပါ။ သူတို့ကသင့်အတွက်နှောင့်နှေးမှုကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးရန် ပို၍ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
အဆင့်ငါး - အပ်ငွေရန်ပုံငွေများစတင်ရောင်းဝယ်ပါ
ယခုသင်သည်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးငွေအချို့ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သင်၏အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးသည်နှင့်သင်ချက်ချင်းကုန်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဘေးထွက်အကြံတစ်ခုအနေနှင့်သင်၏ခြေကိုရှာရန် ECN သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုရှိမရှိစစ်ဆေးသင့်သည်။
5 ၏အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများ
သင်ကိုယ်တိုင် ECN ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်အချိန်မရှိသလော။ စိတ်ပူစရာမလို - Learn2Trade မှသင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အောက်တွင် ၂၀၂၀ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစား ၅ ယောက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၁။ Forex.com - အကောင်းဆုံးဘက်စုံ ECN ပွဲစား
Forex.com သည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းများကိုလည်းသင်ကြားပေးသောအထူးငွေကြေးပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စတော့ရှယ်ယာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ညွှန်းကိန်းများပုံစံ CFD များပါ ၀ င်သည်။ GTX Direct ဟုခေါ်သည့်အရာ၌ Forex.com သည်ပြည့်စုံသော ECN ကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအခကြေးငွေများ၊ Forex အတွဲပေါင်း ၉၀ ကျော်ကမ်းလှမ်းထားပါကသင်သည်အသေးအဖွဲများ၊ အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့်ထူးခြားသောထူးခြားသောအရာများကိုအပြည့်အဝရွေးချယ်နိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကပလက်ဖောင်းသည်အနည်းဆုံးအပ်ငွေဒေါ်လာ ၅၀ ဖြင့်စတင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
အဆင့်မြင့် ECN ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း။
$ 50 နိမ့်ဆုံးသိုက်
90 ကျော် Forex အားလုံးအတွက်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်
စျေးကွက်ရှိအခြား ECN ပလက်ဖောင်းများသည်အခကြေးငွေများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်
2. FXTM- သုညကော်မရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစား
FXTM သည် FCA နှင့် CySEC မှ ထိန်းချုပ်ထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် Forex၊ ကုန်စည်များ၊ အစက်အပြောက်သတ္တုများနှင့် စတော့များမှ အရာအားလုံးကို CFDs ပုံစံဖြင့် ရောင်းဝယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ECN အကောင့်များသည် အနည်းဆုံး အပ်ငွေ $500 လိုအပ်ပြီး ကော်မရှင်များနှင့် တင်းကျပ်သော ပျံ့နှံ့မှုများမှ သင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသော Third-party ပလပ်ဖောင်း MT4 နှင့် MT5 ကို အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ခွင့်လည်း ရှိပါသည်။
$ 500 နိမ့်ဆုံးသိုက်
3. Pepperstone စျေးကွက်များ - အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားအဆင့်မြင့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း
Pepperstone Markets သည်လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပြီး STP နှင့် ECN အကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုပေးထားသည်။ MT4, MT5, cTrader နှင့် ZuluTrader အပါအ ၀ င်ကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများအပြည့်အ ၀ ရရှိနိုင်မည်။
၎င်းသည် အဆင့်မြင့်ဇယားဖတ်ခြင်းနှင့် ပုံဆွဲကိရိယာများအပြင် အလိုအလျောက်စက်ရုပ်များကို အသုံးချနိုင်မှု လိုအပ်သူများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်၊ PayPal နှင့် ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာကို လက်ခံပါသည်။ အနုတ်လက္ခဏာလက်ကျန်ကာကွယ်မှုကို ကမ်းလှမ်းပါက၊ သင်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ scalping နှင့် hedging နှစ်မျိုးလုံးတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။
Think Markets သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုင်စင်များစွာပိုင်ဆိုင်သောအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် FCA အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ Think Account သည်အခြားအကောင့်အမျိုးအစားများစွာအနက် ECN အကောင့်များကိုလည်းပေးသည်။ ဤအထူးသဖြင့်ပွဲစားသည်မြင့်မားသောသြဇာကန့်သတ်ချက်များကိုအသုံးပြုလိုသောကုန်သည်များနှင့်ကျော်ကြားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူဖြစ်ပါက ၁း၅၀၀ ကိုဆိုလိုသည်။
Think Markets သို့သွားပါ
Robo Forex -5Spreads ပါသော ECN Accounts
Robo Forex သည် ECN အကောင့်များကိုပေးသောအွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျမိနစ်အတွင်းစတင်နိုင်ပါသည်, နှင့်အနည်းဆုံးသိုက် $ 10 မှာစတင်။ အကောင်းဆုံးအနေနှင့်သင်၏ ECN အကောင့်မှတဆင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်သောအခါမည်သည့်ပြန့်နှံ့မှုနှင့်မဆိုရင်းနှီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပလက်ဖောင်းသည်ငွေအလုံအလောက်ရှိပြီးလျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သောအမြန်နှုန်းများရှိသည်။
Robo Forex သို့သွားပါ
သာလွန်ကောင်းမွန်သောကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ရေးအခြေအနေများကြောင့် ECN ပွဲစားသည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအားရာထူးများပိုမိုထိရောက်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သော်လည်း ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုထင်သည်။
အလယ်အလတ်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိသည်။ အကျိုးစီးပွားပconflictိပက္ခများကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံး ECN ပွဲစားများကိုအားကိုး။ ရသောကုန်သွယ်မှုနည်းလမ်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်စွာစဉ်းစားကြသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့ ECN ပွဲစားကမင်းဟာပိုက်ဆံဆုံးရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြတ်အစွန်းပဲဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်တစ်ခုဖွဲ့မယ်။
အမြဲတမ်းသတိရပါ၊ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည့်ပွဲစားများသည်သင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေ၏လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာရမည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ သင်၏ ECN ပွဲစားသည်လိုင်စင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်မကသောစည်းမျဉ်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားပါကသင်သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောလက်၌ရှိနေသည်ကိုသင်သိသည်။ ဒါကြောင့် Learn2Trade မှကျွန်ုပ်တို့ website မှာတရား ၀ င်မဟုတ်တဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှအကြံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
မည်သည့်ပွဲစားအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချမီသုတေသနအချို့ပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ပွဲစားနှစ် ဦး နှင့်အတူတူမဟုတ်ဘဲသူတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသွားလိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်ရေး CFDs နှင့် Forex သုည - ပြန့်ပွားအခြေခံပေါ်မှာ
ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀ အထိအပ်နှံပါ
ကုန်သွယ်ရေး Forex, crypto, ကုန်စည်နှင့်ညွှန်းကိန်း
$10 min သိုက်
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံပြီးစာဝှက်ထားသောအခြေခံအဆောက်အ ဦ များပေါ်တွင်စီမံပါ
အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၁၀၀ နှင့်စျေးကွက်ထဲသို့ ၀ င်ပါ
$500 min သိုက်
FX၊ ရှယ်ယာများ၊ cryptos များ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်စျေးကွက်ပေါင်း ၄၅၀၀ ကျော်
သင်သည် Active Trader အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီပါကလစဉ်ကုန်သွယ်မှုပမာဏပြန်အမ်းငွေကိုရယူပါ
လူကြိုက်များ crypto စျေးကွက်များအတွက်အနိမ့်ဆုံးကုန်သွယ်စရိတ် *